BNI – TJE 2019: singa iray lehibe ny fahitana lalam-barotra | NewsMada
BNI – TJE 2019: singa iray lehibe ny fahitana lalam-barotra
30 andro sisa ny fahazoana mifaninana amin’ny TJE Croissance +, sy Startup TJE, ampanaovin’ny BNI Madagascar. Io ny TJE andiany faha-18, fifaninanana hisarihan’ny BNI ireo mpandraharaha, mety hahazoany fampisamboram-bola hatramin’ny 100 tapitrisa ariary, tsy misy zana-bola ny iray taona voalohany. « Dokam-barotra lehibe ho an’ilay mpitantana ny orinasa ny fahazoana TJE, toy ireo efa nahazo tany aloha, izay tsy mitsahatra miroborobo ny sehatra misy azy », hoy Ralaimanisa Ndrina, talen’ny fifandraisana ao amin’ny BNI.
Ny TJE Croissance +, atokana ho an’ireo orinasa maherin’ny herintaona sy mampihodina vola tsy latsaky ny 60 tapitrisa ariary. Ny Startup TJE kosa, ho an’izay rehetra manana tetikasa aroso, ka izay voafidy mahazo fanohanana telo tapitrisa ariary, tsy averina. Tsy ny BNI irery no mitsara ny fifaninana, miampy an’ny EDBM, ny minisiteran’ny Indostria, varotra sy asa tanana, ny vondron’ny mpandraharaha, ny Federasiona Antenimieran’ny varotra, sy ny NextA. Singa iray lehibe jerena ny fahitan’ilay orinasa lalam-barotra eto an-toerana na any ivelany.
« Mahazatra ny maro ny miandry fotoana farany vao mametraka ny antontan-taratasiny, nefa tsara raha alefa aloha hahafahana manampy ny tompony raha misy tokony hahitsy na tsy feno », hoy Ralaimanisa Ndrina. Azo jerena ao amin’ny www.bni.mg ny fepetra rehetra, ary alefa amin’ny tje2019@bni.mg ny antontan-taratasy.